အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: လင်းယုန်တစ်ကောင်ရဲ့ ပုံပြင်
13 Responses to “လင်းယုန်တစ်ကောင်ရဲ့ ပုံပြင်”
စာလာဖတ်သွားပါတယ်...။ အသိပညာ မျှဝေပေးတာ အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမြဲ အားပေး နေမယ်နော်...
Very Very Good Idea and Interesting words .......
ကျွန်တော်လည်း ပျံချင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ၁၀ သိန်းလျော်ဖို့ ပိုက်ပိုက်စုလိုက်အုံးမယ်။ ပျံဖို့ အားပေးတဲ့ အစ်မဆီက ချေးမလားလို့။
i should also try to fly now ....
Like that eagle, sometimes i also forget what i am.
" ဘ၀င်မမြင့်နဲ့။ ဘ၀မမေ့နဲ့တဲ့။ "
ဒီစာလေးဖတ်မိတော့ အမေ့ကို သတိရလိုက်တာ ချောရေ..။
ဟုတ်တယ် ညီမလေးကတော့ ဒီစာစုလေးကို လုံးဝမှန်တယ်လို့ ထောက်ခံချင်တယ်
ဒို့ရဲ့ဧရာတီဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ essay လေးတစ်ပုဒ်လောက်ရေးပါလား အမှတ်တရလေး ။ ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်တယ်ဗျာ စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ဖူး သိလား ။ မချောက စာရေးကောင်းတယ် အားကိုပါတယ် ကျွန်တော်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်တော့ ရေးကြည့်ထားတယ် အာရင်တော့လာဖတ်ကြည့်ပါအုံးခင်
မောင်လေးလဲ အမပြောတဲ့ လင်ယုန်ငှက်လို တွေဝေမနေတော့ပါဘူး